Iva nehanya kwazvo nezvakanaka zvishuwo muhomwe | Ehupfumi Zvemari
Iva nehanya kwazvo nezvakanaka zvido muhomwe
Kana iwe uchifanira kudzidza chimwe chinhu kubva kumusika wemasheya, ndeyekuti iwe unofanirwa kuve unofungira zvakanyanya kana uchiita sarudzo nezvezvido zvevamwe mapato. Dai zvaive zvisiri zveichi chiito chekudzivirira, zvirokwazvo vanopfuura muzvinabhizimusi mumwe vangadai vakaparadzwa mumari yavo pakutanga kwe dambudziko rehupfumi, pakupera kwa2007. Nekuti paive nevazhinji vakanaka vanoongorora zvemari vakafanotaura kuti yaive nguva yakanaka yekuvhura zvinzvimbo mumatunhu. Kunyangwe kutaura nezve mitengo yemasheya mazhinji aive akadhura.
Ingozi yekuti vazhinji vadiki nepakati varimi vanomhanya, sekuda kwako iwe. Hazvishamise kuti irimwe zano rekushamisira kune mamwe makambani ekutepfenyura emari kutengesa nzvimbo dzawo. Izvi zvinoenderana neiyo mazano kubva kune vamwe vatengesi Mupfungwa yekuti musika wemasheya pari zvino uri munzira yekukwira ingangoita gumi%. Sarudzo yakaoma kwazvo kuita mumamiriro ekunze azvino eema equity epasi rose.
Izvo zvese zvinogona kunge zvichikonzerwa nehurongwa hwakaomesesa hwemakambani aya kusunungura zvishoma nezvishoma bepa uye kuti rinoenda kuvashambadzi vadiki senge iwe. Icho chinhu chinoitika nehumwe frequency kubva iyo maoko akasimba zvido yemisika yemari inokunda vatengesi. Kusvikira pakuti aya ndeavo vane chakanyanya kurasikirwa mune izvi zvakakosha, asi panguva imwechete mamiriro ezvinhu ane njodzi kudzivirira nzvimbo dzako muequity. Sezvakaratidzwa mumakore apfuura.
1 Ongororo yakanaka pamusika wemasheya, nei?
2 Nei kuwanda kwakawanda mukuongorora?
3 Zvakajairika tsika
4 Chii chaungaite mune idzi kesi?
5 Mashandiro asina kujeka
Ongororo yakanaka pamusika wemasheya, nei?
Ehe, pane tsananguro ine musoro kune aya mamiriro. Iyo inokona kubva kuchokwadi chekuti vatengesi vakuru vanonamira kune zvimwe zvakakosha zvidzidzo munyika yemari. Nekuti zvirokwazvo, kana chimwe chinhu chikadzidzwa mumusika wemasheya, iwo maoko akasimba vanotenga uye vanotengesa. Izvi mukuita zvinotsigirwa nenyaya yekuti zvinopesana zvinoitika. Ndokureva, nepo hombe mari yekudyara ichisimudza zvigaro zvavo munzvimbo dzakakwirira kwazvo dzechiitiko, mune vashoma nevapakati varimimari vanogadzira kufamba kwakasiyana. Nekupinda munzvimbo idzi uye kugadzirisa kumwe kugadzikana mumutemo wekupa uye kudiwa.
Iyi tsika inosanganisira kurasikirwa kukuru kune kwekupedzisira, kana zvirinani ne zvakanyanya kudzikisa kukoshesa kugona kune izvo zvinofanirwa kuve. Hazvishamisi kuti kune kumwe kukanganisa mune yekupinda uye yekubuda mafambiro mune akaenzana emisika yemari. Nekuti zviripo, kana paine chimwe chinhu chakajeka mune ino chaiyo mamiriro haasi iwo ese emari ekumiririra masangano anoenda nechokwadi chiri pamberi. Iwe haugone kukanganwa pane zvakavanzika zvido zvaunogona kusevha. Kusvika padanho rekuti vangave vanofarira kupinda kana kubuda imwe kukosha kwemari inoshanduka.
Mupfungwa iyi, hauzove nesarudzo kunze kwekuve uri kumberi-kufunga mune ako ese zviito. Uye kana zvichibvira, zano rako rakanakisa ndere kusiyanisa kurudziro nevamwe vamiririri munyika yezvemari uye, kunyanya, kudyara. Iwe unogona kushamiswa neinopfuura imwe nguva paunounganidza iyi mhando yeruzivo. Nekuongorora kwakasiyana zvachose mune yega yega hunhu hwakaongororwa. Ichave yakakosha kukosha kuti iwe ugone kuita yako sarudzo uine yakazara vimbiso. Kana zvirinani kudzivirira chaizvo zvinonyadzisa mamiriro ezvaunofarira mumusika wemari. Chinhu icho kwete vese vatengesi vatengesi vanokwanisa kuzadzikisa.
Nei kuwanda kwakawanda mukuongorora?
Kumwe kwekukahadzika kwaunozvibvunza iwe pamwe nekujairika ndicho chikonzero cheizvi zvakasiyana siyana izvo zvinonyanya kukosha vatengesi vepasirese vanopa. Nekuti zvirokwazvo, haungambokanganwa kuti zviito zvavo zvakakonzerwa ne kungoita zvekutengesa kana bhizinesi zvido. Kunyanya kana usiri ivo kunyange vatengi vavo uye hauna kana hukama navo.
Chinangwa chemuongorori chingave chakapesana nekufungidzira. Nezvinangwa zvakavanzika izvo vashoma vashoma nepakati varimi vanoziva chaizvo. Iwe unongofanirwa kuongorora zvimwe zvacho kuratidza zvawanikwa mumisika yemari. Kunyangwe iwe uine imwe ndangariro iwe unogona kurangarira zvakaitika Zvikamu zveTerra. Ivo vaitengesa pamakumi maviri ema Euro Euro uye mamwe acho aive ekufunga kuti iwo akadhura. Izvo zvakaitika gare gare zvinozivikanwa kune vese vashandisi vemusika wemusika. Kana zvisiri nekuti muzviitiko zvakawanda ivo vakaparadzwa nenzira inoshamisa uye kunyange isinganzwisisike.
Mhosva dzakadai saTerra dzakazara munhoroondo refu yemari. Iwe zvakare haufanire kuenda zvakadaro kure munguva kuti uwane mamwe eaya marongero. Nekuti zvirokwazvo, zvaitika kunyange nezviito zvevachangobva kutsakatika Banco Popular. Iko manzwi evamwe vaongorori vane mukurumbira vemisika yemari anga asingashayike, avo vakati kupinda kukosha iwo mukana wakajeka wekutenga panguva idzodzo chaidzo. Zvingave zvakakwana kuti uende kuraibhurari mabhuku kuti uwane mimwe yeiyi mienzaniso iyo yakasarudza danho revashambadzi vadiki nepakati mune yakanaka pfungwa.
Chero zvazvingaitika, iyo kesi yeTerra haina chero nzira inowanzoitika, kure nazvo. Chimwe chezvakakomba chaive nechekuita nemakemikari makore mashoma apfuura Iyo Silk yeBarcelona. Payaive ichitengesa kutenderera mairi euros pamugove, yaikurudzirwa zvakanyanya nevamwe vanoongorora zvemusika wemari. Hazvishamisi kuti vakaona mune ino shanduko yemari chikumbiro chimwe chekubheja kwakajeka kuita kuti kuchengetedza kubatsire. Kwemwedzi mishoma gare gare, vachisiya misika uye nenzira iyi, vashoma uye varipakati varimimari vakarasikirwa nemipiro yavo yese yezvehupfumi munguva pfupi.
Izvi zvinounza kana iri kirasi remazano akasarudzika mumazano emusika wemasheya ane hunhu. Nekuti iyi mhando yemaitiro anogona kutsausa mumwe mudiki uye wepakati investor. Nematambudziko anonzwisisika anogona kusangana nekirasi yekushanda mumari inoshanduka. Iko kunowanzoitika kuti zvakaitika kune vano saver vane tsika shoma yemari. Izvo chaizvo nekuda kwechikonzero ichi kuti iwe unofanirwa kuve wakangwarira nerudzi urwu rwekusaita basa makomendi. Icho chaicho chaicho cheimwe mhedzisiro iyo kuteerera aya maonero nezve izvo iwe zvaunofanirwa kuita mumisika yemari inogona kuunza.
Chii chaungaite mune idzi kesi?
Chinhu chinonzwisisika kuenda manyuko eruzivo rweese solvency kuti havakwanise kugadzira zvinokanganisa pakuita sarudzo. Uye zvakare, ivo vanofanirwa kuve nekuzvimiririra kukuru uye vasatungamirirwe nechero bhizinesi rekumisikidza rine zvido mumisika yemari. Ipapo chete ndipo patinowana humbowo hwekuchena kweruzivo. Nekuti zviripo, pane zvakawanda zvakakanganisika zvinogona kuitwa kana iwe ukatevera aya ma parameter ekuongorora.
Chero nzira, iwe unofanirwa zvakare kuziva kuti kupindira pakati pevaongorori ndechimwe chezvinhu zvakajairika zvedunhu iri. Kusvika padanho rekugadzirwa nevanhu vane dzidziso shoma pamisika inokosha iyi. Hazvishamisi kuti izvi zvakawedzera mumakore achangopfuura nekuda kwezviitiko zvehunyanzvi hutsva munyika yemari. Pasinei nezvose, zvichagara zvichidikanwa kuti iwe unyatso kusiyanisa ruzivo uye ongororo. Saka kuti nenzira iyi, iwe unonyanya kudzivirirwa kubva kune chero mhando yekusarudzika.
Mashandiro asina kujeka
Mupfungwa iyi, kune akawanda makomendi echikamu chakanaka chevashambadzi vadiki nepakati nezve kubiridzira uko kungave kuitiswa kumwe kuchengetedzeka pamusika wemasheya. Kunyanya, vese avo vanobva capitalization diki uye yakaderera emari mumisika. Hazvishamisi kuti, nemazita mashoma avanogona kusimudza kana kudzikisa mitengo yavo madiro. Sezvinoonekwa mumwedzi ichangopfuura. Mune zvimwe zviitiko, zviine mhedzisiro inokuvadza kune vano saver vane nzvimbo dzakashama muzvikamu
Kubva pane ino mamiriro mune zvese, haugone kukanganwa kuti rakanakisa zano raunogona kushandisa kubva ikozvino zvichienda kunangidzira mari yako kune yakanyanya solvent masheya. Iko kuchazonyanya kunetsekana nemaoko akasimba emisika kutenderedza shanduko yezvikamu. Mupfungwa iyi, zvese zvikumbiro zve Ibex 35 Ivo vanopa kuvimbika kukuru kuitira kuti iwe ugone kuvandudza zvaunotenga nekutengesa. Kusvika padanho rekuti kune vazhinji vanoita mari vanopinda uye vanobuda munzvimbo dzavo zuva rega rega.
Sarudzo indexes ndeimwe yemishonga yakanakisa yekudzivirira kuzviona iwe wakanyura muzviitiko zvisingafadzi pane zvaunofarira. Uye zvakare, iwe uchave shuwa kuti iwe usabatwe wakabatirira panzvimbo dzako. Ndokunge, haugone kusiya misika pamitengo yaunoda. Nekuti kazhinji iwe unozomanikidzwa kuita zvakashata mashandiro uye izvo zvinogona kusarudzira zvisizvo iyo account yako yekutarisa. Ichi chinhu chakakosha zvekuti hauzove nesarudzo kunze kwekudzivirira pazvose.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Iva nehanya kwazvo nezvakanaka zvido muhomwe
Balance yemwedzi minomwe yekutanga yegore pamusika wemasheya